Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012:္ဖ္ဖရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ရွာသားများအပေါ် ဘင်္ဂလီကုလားတို့၏ ကောက်ကျစ်ကြံစဉ်မှု
္ဖ္ဖရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ရွာသားများအပေါ် ဘင်္ဂလီကုလားတို့၏ ကောက်ကျစ်ကြံစဉ်မှု
ရသေ့တောင် မြို့နယ်ထဲက ကုလားရွာ အနောက်ပြင် နဲ့ ရခိုင်၇ွာ ကူတောင်ဟာ ပဋိပက္ခ မဖြစ်ခင်က နှစ်အိမ့် တစ်အိမ်လို နေကြတာ ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးကို တစ်ဦးသိကြပါတယ်။ တောင်ကုတ်ကိစ္စမှစပြီး ကုလား - ရခိုင် ပဋိပက္ခ စတင်လာချိန်မှာလည်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေကြဖို့ တိုင်ပင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
ရခိုင်တွေဖက်က အေးချမ်းတယ်လို့ ထင်နေကြချိန်မှာ ကုလားရွာ အနောက်ပြင်ကတော့ လူသတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ရွာပတ်လည် ရေသွင်းခြင်း၊ သွားလာရေးခက်စေရန် လယ်ထွန်ထားခြင်းတွေလုပ်ပြီး ရန်သွားစ ပြန်ထွက်ပြေးလာမယ့် အဖွဲ့က တစ်ဖွဲ့ ၊ ရခိုင်တွေရောက်လာမယ့်အချိန် ဒါးတွေနဲ့ ခုတ်မယ့်အဖွဲ့က တစ်ဖွဲ့၊ မသေသေးသူတွေကို လက်ဖြတ်၊ ခြေဖြတ်၊ မျက်လုံးဖေါက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်အပြီး လည်လှီး ဟာလာလုပ်သတ်မယ့် သူတွေက တစ်ဖွဲ့အလောင်းဖျောက်မယ့်အဖွဲ့က တစ်ဖွဲ့ စသည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီအချိန်မှာတော့ အိမ်ခြေ ၈ အိမ်သာ ရှိတဲ့ ကူတောင်ရွာရှည် (မြန်မာလို ကူတောင်ရွာလေး) ကို ကုလား ဆယ်ယောက်လောက်က မီးသွားရှို့ကြပါတယ်။
ဒါကို ကူတောင်ရွာက ရွာသားတွေသိသွားတဲ့အခါ ပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကူတောင်နဲ့ အနောက်ပြင် ကုလားရွာဟာ တစ်မိုင်လောက် ဝေးတာမို့ အနောက်ပြင်ကို ရောက်သွားတဲ့ ရခိုင်တွေဟာအ မောဆို့နေပြီး ရေတွေကို အဖြတ်မှာ ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့အချိန် ရွာထဲက ကုလားတွေကို ၀ိုင်းပြီးဖမ်းဆီးကြပါတယ်။ ရွာထဲကို ဆွဲသွားပြီးတဲ့နောက် ရွာထဲမှာ ခြေဖြတ်၊ လက်ဖြတ်နဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ညှင်းပန်းပြီးနောက် လည်လှီး လူသတ်လိုက်ကာ အလောင်းဖျောက်လိုက်ကြပါတယ်။ ရွာထဲကို ဆွဲသွားချိန်မှာလည်း ဘေးရွာတွေလှမ်းမြင်ရရင် သူတို့ရွာမီးလောင်နေပုံ ထင်ရအောင် သူတို့ရွာထဲက ကောက်ရိုးပုံတွေကို မီးရှို့ထားပါတယ်။ သတင်းရလို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ စုလာချိန်မှာတော့ ကုလားတွေက ကြိုတင်ပြီး စစ်တပ်ကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားတာမို့ ရခိုင်တွေက အနောက်ပြင်ရွာကို မဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါဘူး။
အဖမ်းခံရချိန်အထိ မသတ်လောက်ဘူးလို့ ရခိုင်တွေက ထင်နေပေမယ့် အလောင်းကိုပါ ဖျောက်ထားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ ကုလားတွေကို ဖမ်းဆီးနေပါပြီ။ ကုလားတွေလည်း ပြေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012:္ဖ္ဖရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ရွာသားများအပေါ် ဘင်္ဂလီကုလားတို့၏ ကောက်ကျစ်ကြံစဉ်မှု . All Rights Reserved